News - Isi ihe anọ na-emetụta ikike nke ịgbanyụ ọkụ
Isi ihe anọ na-emetụta ikike nke ịgbanyụ ọkụ
E nwere ụdị abụọ nke slaing mgbanaka mmebi, otu bu ije osososo, nke ozo bu eze gbajiri agbaji. Ihe mebiri emebi nke ọsọ ahụ karịrị 98%, yabụ ogo nke ọsọ ahụ bụ isi ihe na - emetụta ndụ nkeslaing mgbanaka. N'ime ha, ịgba ọsọ siri ike, ịdị omimi nke oyi akwa, okirikiri ịgba ọsọ na kọntaktị kọntaktị bụ ihe anọ kachasị mkpa na-emetụta ogo agbụrụ.
1. Raceway ekweghị ekwe
The quenching ekweghị ekwe nke slaing mgbanaka ọsọ agba ọsọ nwere mmetụta dị ukwuu na ibu ọrụ ya. Ọ bụrụ na ndị gosiri gosiri static ibu bụ 1 na 55HRC, kwekọrọ ekwekọ mmekọrịta dị n'etiti gosiri static ibu nke amị na ekweghị ekwe nke agbụrụ bụ dị ka ndị follows
Raceway ekweghị ekwe HRC
Gosiri na static ibu
Na egbu egbu ibu nke Xuzhou Wanda egbu egbu ibu hardway siri ike nke ụlọ ọrụ bụ 55HRC ~ 62HRC.
2.Omimi nke siri ike oyi akwa nke raceway
Dị mkpa omimi nke obi tara mmiri oyi bụ nkwa na slaing mgbanaka oje ije anaghi agba. Mgbeegbu egbu ibu na-eburu ibu mpụga, bọl nchara na ọsọ ọsọ na-agbanwe site na kọntaktị aka na kọntaktị elu, na kọntaktị elu bụ elu elliptical. Na mgbakwunye na nrụgide mkpakọ, ụzọ ọsọ ahụ na-agbadata nrụgide ncha, na nrụgide nsị kachasị na-eme na omimi nke 0.47a (isi ọkara axis nke kọntaktị ellipse) n'okpuru elu, Nke a bụkwa ihe mere a na-akọwapụta oyi akwa omimi dị na ọkọlọtọ dịka dayameta nke nchara ígwè karịa dayameta nkeslaing mgbanaka, na opekempe uru enyere nkwa na ọkọlọtọ. Ihe ngosi a na-egosi nke C nke na-ebu ihe kwesịrị ka ọ dị omimi nke oyi akwa H0.908. Ọ bụrụ na ndị obi tara mmiri oyi akwa omimi chọrọ ka 4mm na-naanị quenched na 2.5mm, na-amị static ibu C ga-ebelata site 1 ka 0.65, ihe gbasara nke puru omume nke mmebi nkeegbu egbu ibu n'ihi ike ọgwụgwụ ekpepụsị ga-ukwuu ụba.
Iji maa atụ, egbu egbu ibu ịgba ọsọ oyi akwa omimi013.35.1250 ọsọ ọsọ bụ ≥ 3.5mm.
3.Okirikiri ntụgharị nke ọsọ ahụ
Rọsọway curvature radius na-ezo aka radius curvature of theway na ngalaba kwụ ọtọ. The ruru t nke radii nke raceway na okirikiri nke nchara bọl nwekwara budata emetụta gosiri static ibu na ike ọgwụgwụ ndụ nkeslaing mgbanaka. Mgbe t = 1.04, ndị gosiri static ibu na ike ọgwụgwụ ndụ bụ 1, na kwekọrọ ekwekọ mmekọrịta dị n'etiti gosiri static ibu na ike ọgwụgwụ ndụ nkeslaing mgbanaka na t dị ka ndị a.
Onu ogugu Ogbe Ogba Ogbe 1.10
Gosiri na static ibu 1 0.82 0.72 0,65
Ndụ ike ọgwụgwụ 1 0,59 0.43 Ugboro atọ
Enwere ike ịhụ ya site na tebụl dị n'elu na nnukwu ọnụọgụ okirikiri, na-ebuwanye ibu ọrụ static na obere ọrụ ndụ.
4.Raceway kọntaktị n'akuku
Akụkụ kọntaktị na-ezo aka n'akụkụ dị n'etiti akara na-ejikọ ebe kọntaktị nke bọọlụ ígwè na ọsọ ọsọ na etiti nke bọọlụ nchara na mpaghara radial (ụgbọelu kwụ) nke egbu egbu ibu. E gosiri static ibu C nkeslaing mgbanaka bụ linearly proportional ka SINα, na mbụ kọntaktị n'akuku bụ n'ozuzu 45 Celsius. Mgbeegbu egbu ibu nwere ọdịiche, nkuku kọntaktị n'ezie karịrị akuku kọntaktị mbụ. Nnukwu ọdịiche ahụ, nke ka nnukwu nkuku kọntaktị ahụ buru ibu. N'ime ọdịiche ahụ akọwapụtara site na ọkọlọtọ, ọ ga-abawanye site na 2 Celsius ~ 10 Celsius, ya bụ, nkuku kọntaktị ahụ ga-eru 47 ° ~ 55 Celsius, nke bụ mgbanwe dị mma maka ikike iburu. Ma ọ bụrụ na nkuku kọntaktị mbụ na oghere dị ukwuu, nkuku kọntaktị ahụ ga-agafe 60 Celsius. Ka ọsọ ahụ na-eyi, oghere ga-abawanye na nkuku kọntaktị ahụ ga-abawanye. N'oge a, kọntaktị ellipse nwere ike ị gafere nsọtụ nke ọsọ ahụ. , Ike nke ọsọ ahụ ga-adị elu karịa nrụgide agbakọtara ọnụ, nke ga-eme ka njedebe nke ọsọ ahụ daa naegbu egbu ibu ga-ada.
Ọmụmaatụ, mbụ kọntaktị n'akuku nke egbu egbu ibu 013.40.1250 bụ 45 Celsius.
Daalụ maka nyochaa isiokwu a, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla slewing mgbanaka agba, dị nnọọ free ịkpọtụrụ anyị!